Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IMacau GT Cup exhaswa yiSands China Isihloko
ISands China Ltd. ibingumxhasi wewonga kule mpelaveki yeSands China Macau GT Cup, eyamkele abaqhubi beemoto zomdyarho abavela kwihlabathi liphela ukuba bakhuphisane kumsitho womdyarho weemoto wesixeko, iMacau Grand Prix.
Inkxaso yeSands yaseTshayina yogqatso yinxalenye yenkxaso eqhubekayo yenkampani yophuhliso lwezemidlalo kunye nokhenketho lwezemidlalo eMacao, ekukhuthazeni inyathelo likarhulumente waseMacao lokhenketho +. Ikwakwinkxaso yokuzinikela kukarhulumente ekubambeni i-68th Macau Grand Prix ngaphandle kwemicelimngeni eqhubekayo yobhubhane, kumzamo wokufaka amandla akhuthazayo eluntwini ngomsitho wesixeko siphela.
Abaphathi beSands China Ltd. abaphathi kunye namalungu eqela babekhokelwa ngumongameli wenkampani uGqr Wilfred Wong ukubona iimoto ezibhalwe uphawu lweSands China kwindawo yokuqala kunye nokuzimasa umsitho wokunikezelwa kwamabhaso emva kogqatso ngeCawa.
Abaqhubi abamele iMacao, iHong Kong, kunye nelizwe eliphakathi bakhuphisana kwiSands China Macau GT Cup, bebaleka kwiimoto zogqatso zokugqibela ukusuka eLamborghini, Aston Martin, Mercedes, Porsche, Audi, kunye neBMW.
ISands China inethemba lokuba ugqatso lunokuba yindlela yokuxhasa abathandi bezemidlalo balapha ekhaya kunye nokukhuthaza amathuba otshintshiselwano ukunceda ukuphakamisa ukhuphiswano lwamazwe ngamazwe.
I-Sands China Ltd. inembali ende yokuxhasa uphuhliso lweziganeko zemidlalo eMacao. Inkampani ixhase, ibambe, okanye iququzelele iminyhadala yemidlalo emininzi kule minyaka idlulileyo, kubandakanya nebasketball, ibhola ekhatywayo, igalufa, amanqindi, ukubaleka kunye nezinye ezininzi. ISands China ihlala isebenzisa amathuba avela kolu khuphiswano kunye nemidlalo yemiboniso ukusingatha imisitho encedisayo efana neekliniki zolutsha kunye nemisitho egxile kuluntu ukuzibandakanya ngakumbi noluntu kunye nokwandisa ifuthe elihle lemisitho kwisixeko. Inkampani ayikhange igungqe kwinkxaso yayo yemidlalo eMacao, ngaphandle kobunzima obuziswe sisibetho.